Ny loko manga amin'ny maro dia mifandray amin'ny moana, ny fahamoram-po, ny fitiavana ary ny fitiavana. Ny tetikasa dia manoro hevitra amin'ny fampiasana azy ireo amin'ny endriny, isan'andro sy ny birao.
Vehivavy manga malefaka - Vita ny akanjo fitafy
Ny lohataona Frivolous sy ny fahavaratra tsy misy ahiahy dia matetika atao any am-piasana - mponina. Saingy tsy misy antony tokony hampalahelo momba ireo zavatra tsara tarehy, mamirapiratra ao amin'ny garderobe. Ohatra, ny hatsikana manga dia tsy hanangana ny fanahinao fotsiny, fa hijery tsara ihany koa, ary koa, afaka mamorona sary maoderina miaraka aminy ianao.
Ohatra, akanjo fotsy fotsy na mainty , feno fotom-bolongana manga iray - dia karazana tsy ho hitan'ny maso. Jereo tsara amin'ny akanjon'ilay akanjo mahitsy na tendron-tsoavaly maromaro. Raha mamela ny fanao ny akanjo, ny ankizivavy dia afaka manao akanjo maromaro na chiffon eo ambanin'ny jacket.
Amin'ny inona no manao akanjo manga?
Alohan'ny handinihana ny fizotran'ny vanim-potoana dia tokony hanadino ny loko manga ny manga:
Mifanaraka tanteraka amin'ny mainty izany;
Mijery tsara tarehy maro samihafa volom-bolafotsy, sira;
"namana" miloko manga;
Matetika izy io no atao amin'ny beige na mavo;
Azo avy amin'ny fari-pahaizana tsy ara-kliotra dia azo atao ny manavaka ny manga manga miaraka amin'ny volomparasy, manga, loko na maitso maitso.
Ny jiro manga manga dia mahasoa ho an'ny andro ihany. Izy no tena ilaina amin'ny dia. Ho an'ny hariva an-tongotra amoron-dranomasina, dia azo atao amin'ny sarafanina lava lava vita amin'ny hazavana mamiratra mamiratra. Raha fitsidihana an-tsehatra izy io, dia mety hipetaka ny akanjo, ohatra fotsy na beige.
Ny iray izay tokony hapetraka amin'ny manga manga dia hanala fialantsiny. Azonao atao ny mividy amin'ny alàlan'ny fampifangaroana azy amin'ny kiraro jeans sy ny loko mavokely, ho an'ny daty na mandeha miaraka amin'ny namana - miaraka amin'ny akanjo jiro fohy.
Kofehy akanjo ho an'ny vehivavy
Lamina lava miaraka amin'ny miverina
Blouse misy fofona
Ny kiraron'i Tod - 36 sarin'ny modely tsara indrindra avy amin'ny marika malaza eran-tany
Kiraro vehivavy - ireo modely tsara indrindra amin'ny tongotrao
Karazana fanatanjahantena inona no tena sarotra?
Nahoana no manonofy ny trozona?
Hiantsena any Copenhague
Fanafody LPG - ny zavatra rehetra ilainao hahafantarana ny fomba fiasa manokana
Karazam-boninahitra Root - fitomboany sy fikarakarana, tsiambaratelo vokatra tsara
Ny mpamosavy an'i Yaroslav Fedorov
Mariah Carey dia nanamarika ny Halloween tao anatin'ilay akanjo lava mena midorehitra matevina amin'ny devoly
Biby manitra miaraka amin'ny taolam-paty
Soisa - toetrandro
Inona no fiheverana toy izany?
Ahoana no handaminana efitrano iray amin'ny hafanana?
Namoaka ny bokiny manokana i Tom Brady tamin'ny alalan'ny resipe
Ny solika maivana amin'ny jasmine